ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားလှပဖို့ သိပံ္ပနည်းကျအချက်အလက်များ – Gentleman Magazine
မိန်းကလေးတိုင်းတောင့်တပြီး . ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့ . . .
Posted on 13/11/2015 by Gentleman Magazine	၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားလှပဖို့ သိပံ္ပနည်းကျအချက်အလက်များ
အမျိုးသားတွေအတွက် ၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားလှပဖို့က အရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား လှပဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေချည်းပဲ စွတ်လုပ်နေတိုင်းလည်း မဖြစ်ပါဘူး။ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို သိရှိမှသာ မပင်မပန်းပဲ လှပလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားလှပဖို့အတွက် သိပံ္ပနည်းကျ အချက်အလက်တွေနဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၀မ်းဗိုက်က အဆီတွေကျသွားပြီး ကြွက်သားလုံးတွေထွက်လာဖို့အတွက်ဆိုပြီး အိပ်ထမတင်တွေချည်းပဲ လုပ်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဆီတစ်ပေါက်ကျဖို့အတွက် အနည်းဆုံးအိပ်ထမတင် အကြိမ်ရေ (၂၅၀၀၀၀)လောက်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗိုက်ကြွက်သား လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တိုင်း ဗိုက်ကအဆီတွေကျမှာမဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ကြွက်သားတွေဟာ အဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို တော့ ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားဖို့အတွက် စွမ်းအင်လိုအပ်တဲ့အခါမှာ ကယ်လိုရီတွေကိုလောင်ကျွမ်းပြီး အသုံးပြု ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လေ့ကျင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာဆိုရင် အပြေးလေ့ကျင့်တာ စက်ဘီးစီးတာတို့ထက်ပိုပြီး ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုပြင်းထန်တဲ့အတွက် စွမ်းအင်ပိုသုံးရပါတယ်။ စွမ်းအင်ပိုသုံးရလေလေ ခန္ဓာကိုယ်က အဆီတွေမြန်မြန်ကုန်သွားလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က ကြွက်သားတွေအားလုံးကို နည်းစနစ်မှန်မှန်နဲ့လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုရင် ၀မ်းဗိုက်ကအဆီတွေ ပျောက်ကွက်သွားပြီး လှပတဲ့ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေကိုလည်း ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်တဲ့အခါ အိပ်ထမတင်နဲ့ မစပါနဲ့
၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားလှပဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်တဲ့အခါမှာ အိပ်ထမတင်တွေ လုပ်ပြီးစလို့မဖြစ်ပါဘူး။ အိပ်ထမတင်လုပ်တာဟာ သင့်ရဲ့ကျောရိုးကို ကိုင်းသွားစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိပ်ထမတင်တွေ လုပ်နေမယ့်အစား အခြားအကြောလျော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ– တံတောင်ဆစ်နှစ်ဖက် ထောက်ကာ ခန္ဓာကိုယ်ကို တောင့်ထားရတဲ့ Plank လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကလည်း အိပ်ထမတင်လုပ်သလိုပဲ တူညီတဲ့ကြွက်သားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးတာဖြစ်ပေမယ့် ကျောရိုးကိုဖြောင့်တန်းနေစေပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီးမှ လုပ်တတ်ကြတဲ့ အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အရင်စလုပ်တာဟာ ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေ လန်းဆန်းနေတုန်းမှာ အကြောလျှော့လိုက်တာက သူတို့ကိုပိုပြီးသန်မာစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားအလေးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မလုပ်ခင်မှာ အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်းကို အချိန်အကြာကြီးလုပ်နေစရာ မလိုအပ်ပါဘူး။ အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်း ၂ ခု ၃ ခုလောက်ကို (၅)မိနစ်လောက် လုပ်ရုံနဲ့ နောက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်တဲအခါမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကိုယ်ရည် စိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ၀က်ခြံ ပြသနာ
Plank အနေအထားကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပါ
လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်တန်းကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်ထောက်ထားပြီး မှောက်ရက်အနေအထားနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြောင့်တန်းစွာ တောင့်ထားရတဲ့အနေအထားမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ပျင်းစရာကောင်းပြီး လွယ်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါ ထင်သလောက်မလွယ်မှန်း သိလာပါလိမ့်မယ်။ Plank အနေအထားလေ့ကျင့်ခန်းဟာ ကျောရိုးကိုဖြောင့်တန်းစေမှာဖြစ်ပြီး အခြားလေ့ကျင့်ခန်းတွေ အားလုံးရဲ့ အခြေခံလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အရင်တုန်းကတော့ အပြေးလေ့ကျင့်တာက အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းတွေထက် အဆီပိုကျတယ်လို့ ယူဆခဲ့ပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဟာ (၆)မိနစ်အပြေးလေ့ကျင့်တာနဲ့ တူညီတယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်တွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် လေ့ကျင့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို ပိုပြီးတော့ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေသ၍ အပြေးလေ့ကျင့် နေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
GM ရဲ့ တခြား ကျန်းမာရေးနှင့် ပက်သက်သော ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ချင်ရင် https://mmgentleman.com/category/health/
မှာအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ —————————————————————————- မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောကျာ်းလေးတိုင်း အားကျစေဖို့ © Gentleman Magazine 🄶🄼
အမြိုးသားတှအေတှကျ ဝမျးဗိုကျကွှကျသားလှပဖို့က အရေးကွီးကိစ်စတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုဝမျးဗိုကျကွှကျသား လှပဖို့အတှကျ လကေ့ငျြ့ခနျးတှခေညျြးပဲ စှတျလုပျနတေိုငျးလညျး မဖွဈပါဘူး။ မှနျကနျတဲ့နညျးလမျးတှကေို သိရှိမှသာ မပငျမပနျးပဲ လှပလာမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဝမျးဗိုကျကွှကျသားလှပဖို့အတှကျ သိပ်ပံနညျးကြ အခကျြအလကျတှနေဲ့ ဆောငျရနျရှောငျရနျတှကေို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ဝမျးဗိုကျက အဆီတှကေသြှားပွီး ကွှကျသားလုံးတှထှေကျလာဖို့အတှကျဆိုပွီး အိပျထမတငျတှခေညျြးပဲ လုပျနလေို့ မဖွဈပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အဆီတဈပေါကျကဖြို့အတှကျ အနညျးဆုံးအိပျထမတငျ အကွိမျရေ (၂၅၀၀၀၀)လောကျလုပျဖို့လိုတယျလို့ သုတသေီတှကေ ဆိုထားပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဗိုကျကွှကျသား လကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျတိုငျး ဗိုကျကအဆီတှကေမြှာမဟုတျပါဘူး။
သငျ့ခန်ဓာကိုယျက ကွှကျသားတှဟော အဆီကိုလောငျကြှမျးစတေဲ့အရာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆို တော့ ကွှကျသားတှလှေုပျရှားဖို့အတှကျ စှမျးအငျလိုအပျတဲ့အခါမှာ ကယျလိုရီတှကေိုလောငျကြှမျးပွီး အသုံးပွု ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခံနိုငျရညျရှိအောငျလကေ့ငျြ့တဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှမှောဆိုရငျ အပွေးလကေ့ငျြ့တာ စကျဘီးစီးတာတို့ထကျပိုပွီး ကွှကျသားလှုပျရှားမှုပွငျးထနျတဲ့အတှကျ စှမျးအငျပိုသုံးရပါတယျ။ စှမျးအငျပိုသုံးရလလေေ ခန်ဓာကိုယျက အဆီတှမွေနျမွနျကုနျသှားလပေဲဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျက ကွှကျသားတှအေားလုံးကို နညျးစနဈမှနျမှနျနဲ့လကေ့ငျြ့ပေးမယျဆိုရငျ ဝမျးဗိုကျကအဆီတှေ ပြောကျကှကျသှားပွီး လှပတဲ့ဝမျးဗိုကျကွှကျသားတှကေိုလညျး ရရှိလာမှာဖွဈပါတယျ။
လကေ့ငျြ့ခနျးစလုပျတဲ့အခါ အိပျထမတငျနဲ့ မစပါနဲ့
ဝမျးဗိုကျကွှကျသားလှပဖို့အတှကျ လကေ့ငျြ့ခနျးစလုပျတဲ့အခါမှာ အိပျထမတငျတှေ လုပျပွီးစလို့မဖွဈပါဘူး။ အိပျထမတငျလုပျတာဟာ သငျ့ရဲ့ကြောရိုးကို ကိုငျးသှားစတောကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အိပျထမတငျတှေ လုပျနမေယျ့အစား အခွားအကွောလြော့လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို လုပျဆောငျသငျ့ပါတယျ။ ဥပမာ- တံတောငျဆဈနှဈဖကျ ထောကျကာ ခန်ဓာကိုယျကို တောငျ့ထားရတဲ့ Plank လကေ့ငျြ့ခနျးမြိုးကလညျး အိပျထမတငျလုပျသလိုပဲ တူညီတဲ့ကွှကျသားတှကေို လကေ့ငျြ့ပေးတာဖွဈပမေယျ့ ကြောရိုးကိုဖွောငျ့တနျးနစေပေါတယျ။
လကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျပွီးမှ လုပျတတျကွတဲ့ အကွောလြှော့လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို အရငျစလုပျတာဟာ ပိုပွီး သငျ့တျောပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ကွှကျသားတှေ လနျးဆနျးနတေုနျးမှာ အကွောလြှော့လိုကျတာက သူတို့ကိုပိုပွီးသနျမာစတောကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
အခွားအလေးနဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ မလုပျခငျမှာ အကွောလြှော့လကေ့ငျြ့ခနျးကို အခြိနျအကွာကွီးလုပျနစေရာ မလိုအပျပါဘူး။ အကွောလြှော့လကေ့ငျြ့ခနျး ၂ ခု ၃ ခုလောကျကို (၅)မိနဈလောကျ လုပျရုံနဲ့ နောကျလကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျတဲအခါမှာ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
တကိုယျရညျ စိတျဖွခွေငျးနှငျ့ ဝကျခွံ ပွသနာ
Plank အနအေထားကို အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျလကေ့ငျြ့ပါ
လကျနှဈဖကျကို ဆနျ့တနျးကာ ကွမျးပွငျပျေါထောကျထားပွီး မှောကျရကျအနအေထားနဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ဖွောငျ့တနျးစှာ တောငျ့ထားရတဲ့အနအေထားမြိုးကို ဆိုလိုပါတယျ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးက ပငျြးစရာကောငျးပွီး လှယျတယျလို့ထငျရပမေယျ့ တကယျလုပျကွညျ့တဲ့အခါ ထငျသလောကျမလှယျမှနျး သိလာပါလိမျ့မယျ။ Plank အနအေထားလကေ့ငျြ့ခနျးဟာ ကြောရိုးကိုဖွောငျ့တနျးစမှောဖွဈပွီး အခွားလကေ့ငျြ့ခနျးတှေ အားလုံးရဲ့ အခွခေံလညျးဖွဈပါတယျ။
အရငျတုနျးကတော့ အပွေးလကေ့ငျြ့တာက အလေးမလကေ့ငျြ့ခနျးတှထေကျ အဆီပိုကတြယျလို့ ယူဆခဲ့ပမေယျ့ အခုအခါမှာတော့ အလေးမလကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုဟာ (၆)မိနဈအပွေးလကေ့ငျြ့တာနဲ့ တူညီတယျလို့ လလေ့ာမှုအသဈတှမှော ဖျောပွထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အလေးမလကေ့ငျြ့ခနျးတှနေဲ့ ခံနိုငျရညျရှိအောငျ လကေ့ငျြ့တဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျကို ပိုပွီးတော့ တိုးတကျကောငျးမှနျစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အလေးမလကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျနသေ၍ အပွေးလကေ့ငျြ့ နဖေို့ မလိုအပျပါဘူး။
GM ရဲ့ တခွား ကနျြးမာရေးနှငျ့ ပကျသကျသော ဆောငျးပါးမြားကို ဖတျခငျြရငျ https://mmgentleman.com/category/health/
This entry was posted in:HealthTagged with:featured	Post navigation
Previous Postဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောတတ်ဖို့ အဟန့်အထားဖြစ်စေသည့် အယူအဆမှား (၆)ခုNext Postယောက်ျားတိုင်း ကြိုးစားကြည့်သင့်တဲ့ Sex Position ငါးမျိုး
Top Posts & Pages	တပတ်ကို နှစ်ကြိမ်လောက်	နေ့တိုင်းလုပ်သင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း(၃)	ဘဝမှာ အောင်မြင်စေဖို့အတွက် ကိုယ်နေကိုယ်ထား လမ်းညွှန်ချက်များ	Oral Sex နဲ့ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေးတွေ ဘာတွေတွေးကြလဲ??	လုံခြုံစိတ် ချရတဲ့ ကာမစိတ်ဖြေနည်း	လိင်ဆက်ဆံပုံနဲ့ စိတ်နေသဘောထား	အိပ်ရာထဲမှာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ သိထားသင့်သည့်အချက်(၇)ခု	ကောင်မလေးတွေ ကြွေစေဖို့	ဘယ်မိန်းကလေးမဆို တမ်းတမ်းစွဲဖြစ်သွားစေနိုင်သည့် နည်းလမ်း(၈)ခု	သင် အာသာဖြေတာ များနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြတဲ့ လက္ခဏာ ၁၀ မျိုး	Gentleman Magazine	Gentleman Magazine